Ethiopia oo dib u Isticmaalaysa Dekedaha Eritrea [SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
Ethiopia oo dib u Isticmaalaysa Dekedaha Eritrea [SAWIRRO]
ASMARA- Raisul Wasaaraha ethiopia Cabiya Axmed oo booqasho rasmi ku tegay caasimadda wadanka Eriteria ee Asmara ayaa sheegay in dalkiisu uu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono adeegsiga Dekedaha Casab iyo Musawac oo ku yaal bada Cas.
Kadib wadahadalo taariikhi ah oo ay wada yeesheen Madaxweynaha dalkaasi Isayas Afeworki, wuxuu sheegay in dalkaasa oo ku nool yihiin 100milay qof ay ka faa’iidaysan doonaan Dekedaha wadankaasi, waxaa kaloo uu sheegay inay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada dal ee dhowaan curtay iyo sida loo heli karo nabad waarta ee dhexmarta.
R/wasaare Abiya ayaa noqday hoggaamiyihii u horreeyay ee Ethiopian ah ee Booqda Eriteria Muddo 20 sanno ah, oo xiriirka dimplamaasiyadeed ee labada wadan uu go’naa ka dib dagaal khasaare badan gaystay oo labada wadan dhexmaray. Waxaana booqashada ra’isul wasaaraha lagu tilmaamay mid uu ku soo afjarayo colaada iyo kala shakiga labada dhinac.
Kumaankun dadweyne ah oo Faraxsan ayaa soo dhaweeyay wafti ra’isul Wasaaraha, iyadoo calanka iyo sawiradda Ra’isul wasaaraha lagu bilay wadooyinka caasimadda Casmara.
Dalka Ertieria wuxuu madaxbanaanidiisa ka qaatay ethiopia 1993dii, ka dib 30 sanno oo dagaalo ay kula jireen dowladihii Ethiopia soo maray.